दुई फिल्म डुबेपछि... - झल्याकझुलुक - नेपाल
कति नवनायिकाले राम्रा ब्यानर र टिम पाउँदैनन्, त्यतिकै ओझेलमा पर्नुपर्छ । कतिचाहिँ चल्तीका निर्माता/निर्देशक र कलाकारसँग काम गर्न पाउँदा पनि चम्कन सक्दैनन् । मरिष्का पोखरेल पछिल्लो लहरमा दरिएकी हिरोइन हुन् । आकाश अधिकारी निर्देशित के म तिम्रो होइन र !
बाट सिने यात्रा थालनी गरेकी मरिष्काको दोस्रो फिल्म थियो, चपली हाइट २ । के म तिम्रो होइन र ! को एकल हिरोइन थिइन् उनी भने चपली हाइट २ चाहिँ ब्लकबस्टर चपली हाइटको सिक्वेल । दुवै फिल्म आफैँमा प्रतीक्षित थिए तर पुर्पुरोमै नभएपछि कसको के लाग्छ, न यी फिल्मले पैसा कमाए, न मरिष्का दर्शकमाझ ‘ मार्क’ भइन् । फलत: चपली हाइट २ प्रदर्शन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि मरिष्काको अर्को फिल्मको छायांकनसमेत सुरु भएको छैन । करिअरको सुरुआतमै यसरी खाली हात बस्नुपर्दाको पीडा कति होला ? मरिष्काबाहेक कसलाई थाहा होला र !